I-LSR - I-Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
I-LSR Liquid Silicone Rubber
Ama-LSR amamaki enjoloba enziwe ngababili weSilicone angafakwa umjovo kwimishini ezisebenza ngokugcwele ngaphandle kwesidingo sokusebenza kwesibili. Ngokuvamile ziphulukisa i-platinamu futhi ziwohloka ngaphansi kokushisa nokucindezelwa. Njengomthetho, isakhi esingu-A siqukethe isivivinyo seplatinamu ngenkathi isakhi se-B siqukethe i-crosslinker. Zilungele ukukhiqizwa kwevolumu ephezulu ngakho-ke kusiza ukugcina izindleko zeyunithi ziphansi.
I-Liquid Silicone Rubber enomjikelezo wayo ophansi, imijikelezo yokwelapha esheshayo, ukuzinza okukhulu nokukwazi ukumelana namazinga okushisa okushisa nokubanda kakhulu kuyenza ilungele ukukhiqizwa kwezingxenye lapho ikhwalithi ephezulu kufanele. Ngokungafani nama-elmomastlast elastomers amaningi, i-LSR ihlala ivumelana nezimo futhi iyaqina ku-60o C futhi igcina izakhiwo zayo ziye kufinyelela ku-200o C. Ngaphezu kwalezi zimfanelo, ubunzima obubanzi nemibala, ama-silastone elastomers asephenduke into yokuzikhethela yaphakade. inani elandayo lezicelo.
Izicelo ezijwayelekile zerabha le-silicone ewuketshezi ziyimikhiqizo edinga ukunemba okuphezulu okufana nokufakwa uphawu, uphawu lwensimbi, izixhumi zikagesi, izixhumi zezikhonkwane eziningi, imikhiqizo yezinsana lapho kufiswa khona indawo ebushelelezi, njengama-nipples, ukusetshenziswa kwezokwelapha kanye nezimpahla zasekhishini njengokubhaka. amapani, ama-spatulas, njll.
Izici ze-A ne-B zinikezwa ezitsheni ezingama-20-kg noma ama-200-kg:
• i-pail kg engu-20 nge-PE inliner (ububanzi obungaphakathi obuyi-280 mm)
• Izigubhu ezingama-200 kg ezine-PE inliner (ububanzi bangaphakathi 571.5 mm)
I-JWT isebenzisa i-liquid silicone injinion injing ekubunjeni uhla olugcwele, eduze kwezingxenye ze-silicone ze-flashless nemihlangano engaphezulu kokubumba. I-Liquid silicone ruble yokubumba inezinzuzo eziningi, kufaka phakathi:
Production Ukukhiqizwa kwevolumu ephezulu: Izinto ezisezingeni eliphakeme ze-LSR zinikeza abakhiqizi ithuba lokusebenzisa imali elingabizi, eliphezulu, elinomthamo omkhulu wezingxenye zokubumba zomjovo we-silicone.
◆ Ithuba eliphansi lokungcoliswa: Inqubo yokuqamba ye-LSR yenzeka ohlelweni oluvaliwe, olunciphisa ukuthi kungenzeka lungcoliswe ngoba opharetha akudingeki athinte impahla, futhi ayivezwanga imvelo.
◆ Izinga eliphakeme le-automation: Ngenkathi inqubo ye-silicone gum irabha isebenza kakhulu, i-LSR ivumela ukusebenza kwe-automation yemishini yokujova, ukusebenzisa amathuluzi, kanye nemishini yokulahla. Lokhu kuphumela ezindlekweni eziphansi zabasebenzi ukuqapha uhlelo futhi kuguqulwe imigqomo yezinto ezibonakalayo.
Time Isikhathi sokujikeleza okusheshayo: Isikhathi somjikelezo wezinto ze-LSR sincike ezintweni ezilandelayo:
• Ukhipha i-flash nemfucumfucu: I-Liicid silicone yerabha ayakhiqizi isikhafu kusuka ku-flash ngenxa yekhono lokudala isikhunta esisebenza nge-flashless.
• Amazinga okushisa kokubumba nokufakwa okungenzeka.
• Izinga lokushisa lezinto lapho lifinyelela isikhunta.
• IJiyomethri yesakhi.
• Izici ezijwayelekile ze-vulcanization.
• I-chemistry yezinto zokwelapha.
I-Silastic LSR ivumela ukwelashwa okusheshayo ngokwanda umbandela wokulimala kanye nomgijimi obandayo aze afike ku-40-80 ° C.
Safety Ukuphepha Okuthuthukisiwe: Izinketho ze-automation zenza kungadingeki ukuthi opharetha bangene endaweni yokubumba. Izingxenye zisuswa emshinini wokubumba umjovo ngamabhande ama-conveyor, ama-chutes noma amarobhothi, anciphisa amathuba okushiswa noma okunye ukukhathazeka ngokuphepha.
I-Liquid silicone inj injing wokubumba inikezela amakhasimende ngenqubo yokuxazulula engaguquki, esebenza kahle futhi engabizi kakhulu efanelekile yezicelo eziningi.
Ezokwelapha / Ezempilo
Products Imikhiqizo yabathengi
Applications Izicelo ezikhethekile
Sakhiqiza izakhi eziklanyelwe futhi ezenzelwe inkambiso, ezisezingeni eliphakeme ze-LSR nezingxenye ze-LSR 2-Shot kumakhasimende ethu ezimakethe zezimoto, ezokwelapha, zesayensi yempilo, izimakethe zezimboni nezabathengi. Sithinte ukuthola isilinganiso, noma ulande umhlahlandlela wethu wolwazi we-LSR.
Xhumana nesazi seJWT